घरमा लक्ष्मीको बास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? घरमा राख्नुहोस् यी चिज - Taja Report
Homeबिज्ञान प्रबिधिघरमा लक्ष्मीको बास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? घरमा राख्नुहोस् यी चिज
July 10, 2018 बिज्ञान प्रबिधि Comments Off on घरमा लक्ष्मीको बास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? घरमा राख्नुहोस् यी चिज
४. घरको मन्दिरमा शंख राख्न शुभ हुन्छ
भर्खरै पशुपति मन्दिर परिसरबाट आयो अत्यन्तै खुशीको खबर